Yesu Bere So Ntoboayi, ne Luka Nhoma no Yɛ Pɛpɛɛpɛ | So Wunim?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mongolian Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Yesu bere so no, sɛn na na woyi asɔrefie ntoboa?
Mmea Abangua no so na na woyi ntoboa wɔ asɔrefie hɔ. Nhoma bi ka sɛ: “Ná wɔde nnaka anaa ‘torobɛnto’ dumiɛnsa asisi ban ho wɔ abrannaa no so ahyia; saa nnaka no mu na na wɔde ntoboa gu.”—The Temple—Its Ministry and Services.
Nnaka no, na ano sua na ase trɛw, enti na na wɔfrɛ no torobɛnto no. Adaka biara, na wɔakyerɛw ho akyerɛ ntoboa pɔtee a wɔde gu mu ne dwuma a wɔde di. Mmea Abangua no so na na Yesu te na ohui sɛ nnipa pii reyi ntoboa; saa bere no na ɔbea kunafo bi nso beyii ne de no.—Luka 21:1, 2.
Nnaka abien a edi kan no, na wɔde afe a wɔwom no asɔrefie tow gu biako mu na wɔde afe a atwam no de agu biako no nso mu. Adaka 3 no, na wɔde mmuruburuw ho ntoboa na egu mu, ɛnna wɔde mmorɔnoma de nso gu adaka 4 no mu. Ntoboa a wɔde guu adaka 5 mu no, wɔde tuaa nnyina ho ka, ɛnna adaka 6 no nso wɔde tuaa aduhuam ho ka; adaka 7 no, wɔde emu ntoboa tuaa sika anwenne ho ka. Adaka 8 no, sɛ nkurɔfo koyi bɔne afɔre ntoboa a, nea ɛbɛboro so biara no, ɛno mu na wɔde gu. Afei sɛ wokoyi asodi afɔre ho ntoboa a, nea ɛbɛka no, na wɔde gu adaka 9 no mu, ɛnna wɔde nnomaa a wɔde bɔ afɔre ho ntoboa a ɛbɛka no guu adaka 10 no mu; adaka 11 no nso, na wɔde Nasirifo ho ntoboa a ɛbɛka no gu mu. Sɛ akwatafo ho fi na woyi ho ntoboa a, nea ɛbɛka no, na wɔde gu adaka 12 no mu. Ntoboa foforo biara nso a obi koma bɛka no sɛ onyi no, na ɔde gu adaka 13 no mu.
Nsɛm a Luka kyerɛwee wɔ Bible mu no, ne nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ?
Luka na ɔkyerɛw Asɛmpa a ne din da so no ne Asomafo Nnwuma. Luka kae sɛ ‘wahwehwɛ nneɛma no nyinaa mu pɛpɛɛpɛ afi mfiase,’ nanso nhomanimfo bi kyerɛ sɛ ne nsɛm no bi nni mu. (Luka 1:3) Enti asɛmmisa no ne sɛ, na ne nsɛm no yɛ pɛpɛɛpɛ?
Nsɛm a Luka kyerɛwee no, yebetumi de atoto abakɔsɛm ho ahwɛ sɛ ɛno ara ne no anaa. Ɛho nhwɛso ni: Ná Roma aban mpanyimfo wɔ abodin a nkurɔfo pii nnim, nanso nsɛm a Luka kyerɛwee no, ɔde bi baa mu pɛpɛɛpɛ. Abodin no bi ne ɔman mpanyimfo a wɔwɔ Filipi, atumfoɔ a wɔwɔ Tesalonika, ɛnna mpanyimfo a wɔhwɛ afahyɛ so wɔ Efeso. (Asomafo Nnwuma 16:20; 17:6; 19:31) Afei nso, Luka frɛɛ Herode Antipa sɛ ɔmantam sodifo, na ɔfrɛɛ Sergio Paulo sɛ Kipro amrado.—Asomafo Nnwuma 13:1, 7.
Roma ahemman no mu no, baabiara ne sɛnea na wɔfrɛ wɔn mpanyimfo, enti ɛma yehu sɛ Luka de abodin a ɛfata na ɛyɛɛ adwuma. Bible ho nimdefo Bruce Metzger ka sɛ: “Emu biara a ɔde yɛɛ adwuma wɔ Asomafo Nnwuma mu no, wohwɛ baabi a ɔreka ho asɛm ne bere a ɔreka ho asɛm no a, wutumi hu sɛ ɛno ara ne no.” Ɔbenfo William Ramsay kaa Luka ho asɛm sɛ ɔyɛ “abakɔsɛm kyerɛwfo a ne nsɛm no di mu paa.”
So Wunim?—January 2014